Andro iraisam-pirenena amin’ny ranomasimbe
Ranomasina salama, planeta salama
�Ranomasina salama, planeta salama�, fankalazana nasionaly ny andro iraisampirenena hoan’ny ranomasimbe natao teto Toamasina ny faha-10 jona lasa teo.
Maro ny fifanarahana nataon’ny Madagasikara eo amin’ny sehatra iraisampirenena momba ny ranomasimbe, ka nametraka ministera manokana misahana ny ranomasina ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Araka izany dia ny minisitry ranomasimbe no tonga nakalaza izany andro natsionaly izany. Hetsika maro no noentina nanaovana ny fankalazana teo ny fandraofana akora vita amin’ny sache tetsy amin’ny torapasiky ny tananan’ny Toamasina , niaraka tamin’ireo orin’asa, miankina amin’ny fanjakana sy tsy miankina amin’ny fanjakana, eo koa ireo fikambananana maro samy hafa.
Ny tolak’andro kosa dia nisy ny famelabelarana ny maha zava dehibe ny ranomasimbe sy ireo arena ao anatin’ny ranomasimbe. Nivohitra tamin’ny famelabelarana izay nataon’ny Rtoa RANDRIANARISOA L�onide Ylenia, minisitra ny ranomasimbe fa mifamatotra ny ranomasimbe sy ny olombelona. Araka ny fantatra ihany koa fa misy blocs na plastika ao amin’ny ranomasimbe pasifika ao izay hita avy amin’ny satelita raka izany io no laharampahamehan’ny firenena rehetra amin’izao fotopana iza mba handravana izany. Isany laharampahamehan’ity minisitra ity ny fanangonana ireo antontan’isan’ireo arena ao anaty ranomasina mba ahafahana mitrandra sy miaro ary hitantanana izany.
(134) Prud'Homme R. : 27-06-2016 - 11:31